Buy ဒေါက်တာ မေသူ အဆီကျ ဗိုပ်ချပ်လိမ်းဆေး. (5,500Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ဒေါက်တာ မေသူ အဆီကျ ဗိုပ်ချပ်လိမ်းဆေး.
.....ခလေးမွေးပီး ၂ပတ် ဆိုလိမ်းလို့ရပါပီ
...သဘာဝ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားလို့ ဘေးအန္တရာယ် မရှိပါပူး..
လူကြီး လူငယ် ကျား.မ မရွေး အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံး.တစ်လ နေ့စဉ်မိနစ် ၂၀ မှန်မှန် လိမ်းပေးပါ.
တစ်လအတွင်း ချပ်ရပ် လှပ အဆီကျ လာစေမှာ ဖြစိပါတယ်..
အမည်: ဒေါက်တာ မေသူ အဆီကျ ဗိုပ်ချပ်လိမ်းဆေး.